म अर्थात् बिग्रेकी केटी ! - Himalayan Kangaroo
म अर्थात् बिग्रेकी केटी !
Posted by Himalayan Kangaroo | ८ श्रावण २०७४, आईतवार ०१:५५ |
‘नचिनेको मान्छेलाई किन साथी बना’को त ? ‘
सहयोग र न्यायको अपेक्षामा रहेकी म, अनुत्तरित रहें । स्कुले विद्यार्थी छँदा पहिलो पटक पढेको र हालसम्म साथमा रहेको तसलिमा नसरिनको पुस्तक ’बिग्रेकी केटी’ का पानाहरु दिमागमा सरसर्ती फर्कन थाले । व्यक्तिगत रुपमा आफूले नचिनेको मान्छेलाई मैले सामाजिक संजालमा साथी बनाएँ, आफूमाथि आएका अश्लिल शब्दलाई सार्वजनिक गरें, ’ब्लक’ गरेर चुप लाग्नुको साटो दुनियाँलाई सुनाएँ । त्यति सानो कुरालाई लिएर कानूनी प्रक्रियामा जान चाहें, अविवाहित मैले आफ्नो इज्जत जोगाउनुको साटो ती अश्लिल शब्द प्रिन्ट गरेर हातमा लिएर हिडें । मैले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हानें । म बिग्रेकी केटी बनें ।
त्यति सानो कुरालाई लिएर कानूनी प्रक्रियामा जान चाहें, अविवाहित मैले आफ्नो इज्जत जोगाउनुको साटो ती अश्लिल शब्द प्रिन्ट गरेर हातमा लिएर हिडें । मैले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हानें । म बिग्रेकी केटी बनें ।
कसैले सामाजिक संजालमा मलाई अश्लिल सन्देश पठायो र प्रतिउत्तर नआएको झोंकमा इनबक्स र फोटो दुवैमा अश्लिल गाली लेख्यो । मैले भद्दा सन्देशहरु पठाउनेलाई ब्लक गरेकी छु, कतिलाई बेवास्ता गरिदिएकी छु । तर त्यो व्यक्तिको त्यतिबेलाको हर्कत र शब्द मेरो सहनशक्ति भन्दा बाहिरको थियो । त्यसैले मैले सामाजिक संजालको भित्तोमा राखिदिएँ । त्यसपछि आउन थाले साथ दिने भन्दा बढी सहानुभूति र सुझाव मिसिएका प्रतिक्रियाहरु ।
‘किन बेकारमा मुद्दा बना’को ? कमेन्ट हटाइदेऊ र उसलाई ब्लक गरिदेउ । यसले उसलाई हैन तिमीलाई असर गर्छ ।’
मलाई असर गर्ने किन ? अपराधी ऊ कि म ? अनि सज्जनवृन्द ! उसलाई ब्लक गरेर मेरो आत्मसम्मान फर्केर आउँछ ? आत्मसम्मान नै नभएको त्यो इज्जतको के काम ?
‘केटीको इज्जत कच्चा हुन्छ । तिमीले यसरी सार्वजनिक गर्नाले तिमीलाई यतिबेला साथ दिईरहेका मानिसहरुको नजरमा समेत तिम्रो छवि पहिलेको जस्तो रहँदैन ।’
महासय , गल्ती उसले गरेको हो, मैले होइन । तिम्रो कस्तो बुद्धिवान दिमाग, कस्तो पुरुषत्व ? जसले अपराधीलाई अपराधी हो भन्न सक्दैनौ र पिडीतमाथि आफ्नो कायरता लाद्न खोज्छौ ।
‘चुप लागेर बस । यसरि सार्वजनिक गर्दा तिमीलाई पछि विवाह गर्न समेत गाह्रो पर्छ ।’
माफ गर्नुहोस्, सबै पुरुषले महिलालाई उही दृष्टिकोणले हेर्छन् भन्ने म मान्दिन । यस्ता पुरुषहरु पनि छन्, जसले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने हिम्मत गर्न सक्छन् । जसले महिला कच्चा माटोको ढिस्को नभई मानव पनि हुन् भन्ने बुझेका छन् । र, कुरा रह्यो, तपाईंको जस्तो मानसिकता बोकेकाहरुको, ती त मेरो रोजाईमा पनि पर्दैनन् । यो पनि बुझ्नुहोस् की महिलालाई बाँच्नकै लागि विवाह बन्धनमा बाँधिन वा पुरुषको साथ लाग्न आवश्यक छैन ।’
धेरै मात्रामा आएको, यहाँसम्मकी कानूनी प्रक्रियामा जाँदा समेत आएको प्रश्न, ‘नचिनेको मान्छेलाई किन साथी बना’को त ?’
ए हजुर ! हजुरको सामाजिक संजालमा के सबै व्यक्तिगत रुपमा चिनेका मानिसहरु मात्र छन् ? नचिनेका मानिससंग चिनजान गर्ने हक पुरुषको मात्र हो ? त्यसोभए तपाईंको फेसबुक अकाउन्टमा किन महिला साथीहरुको लर्को छ ? अनि, सामजिक संजाल नचिनेका मानिसलाई साथी बनाउने, विचारको आदानप्रदान गर्ने ठाउँ बन्न सक्दैन र ? फेरी म फाट्टफुट्ट आफ्ना विचार लेख्न कोसिस गर्ने मान्छे, मैले मेरो लेखका पाठकहरुसंग परिचय नगरूँ ? महिला भएकै कारण मेरो विचार बारे छलफल गर्न र मेरो विचार धेरै मानिसहरु समक्ष पुर्याउनबाट म बन्चित बनूँ ?
नचिनेका मानिससंग चिनजान गर्ने हक पुरुषको मात्र हो ?
साँच्चै नै, तसलिमाले भनेजस्तै हाम्रो समाजमा छोरीहरुलाई खुल्ला आकाशमूनि बाख्रोलाई डोरीले बाँधेर राखे जसरि राखिएको छ । स्वतन्त्रताको नाममा खुल्ला आकाशमूनि, खुल्ला चौरमा त ऊ छ तर पुग्न त्यहाँसम्म मात्र पाउँछ, जहाँ सम्म डोरीले भ्याउँछ । त्यही डोरीले तिम्रा छोरीहरुको जीवन अल्झिएको छ । त्यही डोरीले तिम्रा छोरीहरुको जीवन अल्झिएको छ, त्यो डोरीले उनीहरुलाई प्रतिरक्षा गर्नबाट रोकेको छ, गुहार पाउनबाट रोकेको छ र त्यही डोरीले कतिको जीवन निलिदिएको छ ।
बलात्कारका घटना आउँदा महिला सम्मान, अपराधीलाई सजाय आदिका कुरालाई लिएर कुर्लिने तिमी, महिलाको आत्मसम्मानको बारेमा चाहिं किन सोच्दैनौ ? महिलाको आत्मसम्मानमा प्रहार हुने ती तिम्रा शब्दहरु र व्यवहारले नै महिला मनोरन्जनको साधन हो, यौनको प्रतीक हो, पुरुषको दास हो भन्ने मानसिकतालाई संकेत गर्छ र जघन्य अपराध निम्त्याउँछ । यो मानसिकताको संकेत पछिल्लो समय राष्ट्रपतिमाथि सामजिक संजालमा पोखिएका तुच्छ शब्द पनि हुन् ।
महिला राष्ट्रपति भएको देशको नागरिक भनेर गर्वका साथ भन्ने मैले अनुभव गर्न नपाएको कानुनी न्याय अहिले राष्ट्रपतिलाई मिल्दा हर्षित छु । यो सुरुवातले अब नेपाली छोरीहरु शीर निहुराउन बाध्य हुनेगरी गुथाइएको इज्जतको पगरीलाई इतिहासको संग्रहालयमा राखी न्यायपूर्ण समाजको नागरिकको रुपमा शीर उठाएर आत्मसम्मानका साथ जिउन सकुन् ।
बलात्कारका घटना आउँदा महिला सम्मान, अपराधीलाई सजाय आदिका कुरालाई लिएर कुर्लिने तिमी, महिलाको आत्मसम्मानको बारेमा चाहिं किन सोच्दैनौ ?
Previousराष्ट्र बैंकमा फेरि ब्युँतियो ३० वर्षे विवाद
Nextछोराको मृत्युको नक्कली कागजातको आधारमा १० लाख राहत !
कसले गर्यो मदन भण्डारीको हत्या ? यस्तो छ अहिलेसम्मका रिपोर्टहरु
३ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०१:४०
विन्टर कियर: चिसोमा स्किनको हेरचाह गर्ने केहि उपाय
२ मंसिर २०७१, मंगलवार १५:२८
‘के सन्देश बोकेर देउवा दिल्ली जाँदैछन् ?’
५ बैशाख २०७३, आईतवार १७:३९
नेपाल नेपालीको कि विदेशीको ?
५ कार्तिक २०७३, शुक्रबार ०४:४६